दलान नेपाल : मधेशी मोर्चा भित्र एकिकरणको दौडधुप
मधेशी मोर्चा भित्र एकिकरणको दौडधुप
थ्रेसहोल्ड लागु भएपछि मधेशी मोर्चा सम्मलीत पार्टीहरु विच एकिकरणको दौडधुप बाक्लीएको छ ।
१३ चैतमा सप्तरीको मलेठमा आयोजना गरिएको शोकसभामा मधेशी मोर्चालाई एउटै पार्टी बनाउने घोषणा मधेशी अध्यक्षहरुले गरे । हुनत मधेशी पार्टीहरु विचको एकिकरण मुद्धा मधेश राजनितीमा नयां चाही होइन तर पछिल्लो समयमा ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड लागु भए पछि यो मुद्धा पुन सतह देखिएका छन । १३ चैतमा सप्त्तरीको मलेठमा एकिकरणगर्ने उद्यघोष गरेका ४ जना मधेशी अध्यक्षहरु १६ चैतमा बर्दीवासमै गोप्य बैठक गरे । जुन बैठकमा फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव, तराई मधेश सदभावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादव, राष्टिय मधेश समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारी र नेपाल सदभावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा थिए । त्याहा बाट काठमाडौ आए लगत्तै तराई मधेश सदभावना पार्टीले राम नरेश रायको संयोकत्वमा एउटा टोली बनाउदै एकिकरणका लागी गृहकार्य गर्ने जिम्मा दिए । रायले २० चैतमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो संग एकिकरणको सन्दर्भमा झण्डै अढाई घण्टा लामो कुराकानी गर्न भ्याइ सकेका छन । यी दुइ अध्यक्ष वाहेक रायले फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित सवै अध्यक्षहरु संग पहिलो चरणको वार्ता गरिसकेका छन । राय भन्छन, पहिलो चरणमा हामी सवै अध्यक्षहरु संग एकिकरणका लागी प्रारम्भिक कुराकानी अगाडी वढाएका छौ ।
हुनत मधेशी पार्टीहरु विचको पछिल्लो एकिकरणको आन्तरिक दौडधुपमा राय एक्ला मात्र नेता होईन । सम्बद्ध स्रोहरुका अनुसार पछिल्लो चरणमा पुन थ्रेसहोल्ड पछि सूरु भएको एकिकरण चर्चामा फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव, तमसपा अध्यक्ष महेन्द्र यादव, तमलोपा उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, रामसपा महासचिव केशव झा, सदभावनाका केन्द्रिय सदस्य उपेन्द्र महतो लगायतका नेताहरु दौडधुपमा व्यस्त छन । एकिकरणको चर्चा र केहि प्रारम्भिक बैठकहरु गरेर १७ चैतमा दिल्ली उडेका फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष २० चैतको राती काठमाडौ फर्के संगै पुन यो दौडधुपमा बाक्लो गरी सहभागी भइरहेका छन । २० चैतको राती दिल्लीवाट फर्के संगै २१ र २२ चैतमा उनले पुन महेन्द्र यादव, अनिल झा, शरदसिंह भण्डारी र सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसंग दुई चरणको छलफल गर्न भ्याइ सकेको छ ।
मधेशी पार्टीहरु विचमा एकिकरणको हल्ला वेला वेलामा चल्ने गर्छन । तर विगतको कारण होला आम मधेशी वृतमा मधेशी पार्टीहरुको एकिकरण चर्चा हासो ठठाको विषय बन्न पुगेको देखिन्छ । तर पछिल्लो समयमा संसदको राज्य व्यवस्था समितीले थ्रेस होल्डको नया प्रावद्यान गरे पछिको अवस्थामा मधेशी पार्टीहरु सामु वाध्ययतात्मक अवस्था सिर्जना भएको स्वयंम मधेशी पार्टीहरु स्विकार गर्छन । ९ चैतमा संसदले पास गरेको घ प्रतिशतको थ्रेसहोल्डको व्यवस्थालाई केलाउने हो भने दोस्रो सविधानसभाको निर्वाचनमा एउटा पनि मधेशी पार्टीहरुको प्रतिनिधित्व हुन सक्ने अवस्था देखिदैनन । तथ्याकंहरुका अनुसार हाल पनि अशोक राईहरु संगको एकिकरण पश्चात उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघिय समाजवादी फोरम नेपाल मात्रै प्रतिनिधित्वको लागी योग्य देखिन्छ । तमलोपा, सदभावना, रामसपा, तमसपा, नेसपा र फोरम गणतान्त्रिक राजनितीक मैदान वाट बाहिरिने देखिन्छ । यही त्थ्याकंका कारण होला मधेशी मोर्चाको पछिल्लो एकिकरण चर्चामा उपेन्द्र यादवको चर्चा कतै देखिएका छैनन भने वाकी बचेका छ ओटा दलहरु मोर्चालाई एउटै पार्टी वनाउने गृहकार्यमा जुटेका छन । तमलोपा उपाध्यक्ष बृषेशचन्द्र लाल भन्छन, अहिले नै केहि ठयाक्कै भन्न नसकिए पनि एकिकरणको पछिल्लो संवादहरु साकारात्म्क नै देखिन्छ ।
हुनत गत बर्ष उपेन्द्र यादव संग आन्दोलनको मोर्चामा रुष्ठ भए पछि नै महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले तमलोपा र सदभावनालाई एकिकरण गरेर मधेशको सवै भन्दा ठुलो पार्टी बनाउने योजना बनाएका थिए । अती गोप्य रुपमा यी दुवै अध्यक्षहरुले तमलोपाको तर्फवाट वुषेशचन्द्र लाल र सदभावनाको तचर्फवाट लक्ष्मणलाल कर्णलाई पार्टी एकिकरणको विस्तृत खाका बनाउने जिम्मा नै दिएका थिए । अघिल्लो असारमा तमलोपाको पहिला महाधिवेशन नवरपरासीमा सूरु हुनै लाग्दा सदभावनाको कार्यसम्पदन समिती बैठकवाट महतोले एकिकरणको वारेमा औपचारिक निर्णय नै गरे । र नवलपरासीमा तमलोपा महाधिवेशन उदघाटन सत्रमा पुगेका महतोले त्यही मन्चवाट तमलोपा संग एकिकरण गर्ने उद्धघोष गरेका थिए । तर त्यो प्रयास पनि पछिल्लो समयमा सफल भएको देखिएनन । पछिल्लो समयमा सुरु भएको एकिकरणको प्रयास पहिला भन्दा भिन्न रहेको जिकिर गर्ने फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष यादव भन्छन, यस पालीको दौडधुपहरु बाध्यताको जगमा रहेकाले अविश्वास गर्ने ठाउ छैन, बैशाख मसान्त सम्ममा यो दौडधुपको एउटा नतिजा आउछ ।
विगतमा किन हुन सकेनन ?
०६४ को मंसीरमा राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादव मिलेर संयुक्त मधेशी मोर्चा बनाए । त्यही माघमा भर्खर नयां पार्टी तमलोपा खोलेका महन्थ ठाकुर त्यसमा मिसिएर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा बनाए । ०६४ फागुनमा दोस्रो मधेश आन्द्योलन गरेको यो मोर्चा पहिलो सविधानसभामै एक रहन सकेनन । नेतृत्वहरुको आफ अफनै दाउका कारण मोर्चाकै व्यानरमा पहिलो सविधानसभामा भाग लिएनन तत्कालिन मधेशी पार्टीहरु । त्यस पछि एकाएक सुस्ताएको मोर्चा पहिलो सविधानसभा विघटन संगै पुन चर्चामा आयो । त्यती वेला तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मोर्चा र मधेशी पार्टीहरु विच पुन एकिकरणको अभियान नै सुरु गरे । तर मधेशी नेतृत्वहरु एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्दै आ आफै तालमा ०७०को दोस्रो सविधानसभामा भाग लिए । तर निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित भए पछि पुन मधेशी पार्टीहरु विच एकिकरणका लागी लामो छलफलहरु र बैठकहरु चल्यो । महिनौ सम्म चलेको उक्त प्रयास पनि अन्नतह असफल भयो । पुन मधेशी पार्टीहरु मोर्चाकै व्यानरमा एक भएर आन्द्योलनमा होमिए ।
यसरी विगतमा नेतृत्व टकरावकै कारण सधै असफल हुदै आएको मधेशी पार्टीहरुको एकिकरण पुन कसरी सफल होला ? यो प्रश्न स्वयंम मधेशी पार्टीहरुकै पदाधिकारी विचमै देखिन्छ । गत बर्ष उपेन्द्र यादवसंग चिढिए पछि महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो विचमा सुरु भएको एकिकरण अभियान पनि त्यसमै गएर अडकिएको उक्त दुवै पार्टीहरु सम्बद्ध स्रोतको दावी छ । तमलोपाले सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलाई हृदेश त्रिपाठी संगै एकिकृत पार्टीको सहअध्यक्ष दिने प्रस्ताव गरे पछि महतोले अस्व्किार गरेका थिए । महतोले आफुलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिने पर्ने दावी गरेका थिए । तमलोपाको एएटा तप्का त्यो मान्न अस्विकार गरे पछि त्यो त्यतीकै असफल हुन गयो ।
होला त अव एकिकरण ?
पछिल्लो समयमा पुन एकिकरणको दौडधुपमा लागेकाले होला मधेशी वृतमा मोर्चाको एकिकरण वारेमा चर्चा हुन थालेको छ । यद्यपी मधेशी नेताहरुको विगतका कारण होला संशय पनि त्यतीकै देखिन्छ । तर मधेश राजनितीकका खेलाडीहरु भन्छन, यस पटक मधेशी पार्टीहरु संग एकिकरण नगरेर सुखै छैनन । विगतमा भारतीए सदिच्छा संग समेत जोडेर व्याख्या गर्ने मधेशी जमातहरु अहिले मधेशी नेताहरुको भविष्यसंग जोडेर यसलाई हेर्न थाली सकेका छन । तमसपाका नेता रामनरेश राय भन्छन, को को कहिले कहिले गर्छ मात्रै हो तर गर्न त सवैले गर्नै पर्छ । सदभावना पार्टीका केन्द्रिय सदस्य उपेन्द्र महतो भन्छन, विभिन्न तहहरुमा छलफलहरुमात्रै चलीरहेको छैनन, मधेशी पार्टी भित्रै पनि युवा जमतको एकिकरणका लागी ठुलो दबाब देखिन्छ ।
हुनत ९ चैतमा संसदले थ्रेसहोल्ड सहितको व्यवस्था सहितको राजनितीक दल सम्बन्धी एन पारित गरे पछि सवै मधेशी पार्टीहरु अन्य साना पार्टीहरु भित्र त्यस वारेमा नयां बहस सुरु भएको छ । अन्य वाम साना घटकहरुले त्यसको विरोध गरे पछि मधेशी पार्टीहरु थ्रेसहोल्डको व्यवस्थालाई विरोध गरेका छैनन । फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष यादव भन्छन, मधेशमा मधेशी पाटीृहरु एक हुनु पर्ने जब्बरदस्त भावना पहिला देखि नै भएकाले मधेशी पार्टीहरु यसको विरोध गर्नुकोकुनै तुक मानेनन । पहिलो संविधानसभामा प्रमुख रुपमा तीन ओटा मधेशी पार्टीहरु थिए जुन दोस्रो निर्वाचनमा जादा सम्म १३ ओटामा परिणत भइसकेको थियो । विगतमा मधेशी पार्टीहरुका शिर्ष नेताहरु वाट गल्ती भएकै हो, यादव भन्छन, त्यसैले एकिकरण गरेर मधेशमा नयां सन्देश दिनै पर्छ । गत बर्ष मधेशमा नयां सविधान विरुद्ध ५ महिना लामो आन्द्योलन भए पनि मोर्चाका नेताहरु आलोचना कम भएको देखिएनन । मधेशी नेताहरुले नेता पिच्छै पार्टी बनाउने र मन्त्री खाएर मधेशको मुद्धालाई ओझेलमा पारेमा भन्दै मधेशमा व्यापक वेला वेला आलोचना हुने गर्छन । त्यही भएर होला पछिल्लो समयमा थ्रेसहोल्डको काुनुनी धरातल पाए पछि मोर्चाका नेताहरु एकिकरण गर्न बाध्यात्मक अवस्थामा देखिन्छ । यसको पछिल्लो कसरतमा दौडधुप गरिरहेका मधेशी नेताहरु भन्छन, चाडै नै मधेशी पार्टीहरुको मुहार फेरिन लागेको छ ।
funding Capital August 24, 2017 at 4:44 PM